လီဗာပူး တို့ ကို ယူနိုကျတကျ ရပျတနျ့နိုငျ လိမျ့မယျ ဆိုတဲ့ . . . ခြာလီနီကိုလပျဈ ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ ( ၉ ) အတှကျ ခနျ့မှနျးသုံးသပျခကျြမြား - SPORTS MYANMAR
လီဗာပူး တို့ ကို ယူနိုကျတကျ ရပျတနျ့နိုငျ လိမျ့မယျ ဆိုတဲ့ . . . ခြာလီနီကိုလပျဈ ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ ( ၉ ) အတှကျ ခနျ့မှနျးသုံးသပျခကျြမြား
နိုငျငံ တကာ ပှဲစဉျတှေ အပွီး မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂျ အမှတျပေး ပွိုငျပှဲကွီး ပွနျလညျ စတငျ လာခဲ့ ပါပွီ ။ ယခု အပတျ မှာတော့ ပှဲစဉျ ၉ ကို ယှဉျပွိုငျ ကစား သှား ကွမှာ ဖွဈပွီး ပှဲကောငျး မြားစှာ ပါဝငျ လို့ နခေဲ့ ပါတယျ ။ အိုးထရကျဖျိုဒျ့ မှာ ကစားမယျ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ နဲ့ လီဗာပူး ၊ ပဲလစျေ့ နဲ့ မနျစီးတီး ၊ စပါး နဲ့ ၀ကျဖိုဒျ့ တို့ရဲ့ လနျဒနျ ဒါဘီ အပါ အဝငျ အခွား သော ပှဲကွီး ပှဲကောငျးမြားစှာ ကို ကွညျ့ရှု ခံစား ကွရဦး မှာပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့ ယခု အပတျ ယှဉျပွိုငျ ကစား ကွမယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျတှေ မှာ ဘယျလို ရလဒျတှေ ထှကျပျေါ နိုငျမလဲ ဆိုတာ ကို ခြာလီ နီကိုလပျဈ ( Sky Sport ) ရဲ့ ခနျ့မှနျး သုံးသပျမှုတှေ ကို လလေ့ာကွညျ့ကွရ အောငျဗြာ . . .
၁ ။ ပဲလစျေ့ – မနျခကျြစတာ စီးတီး
နိုငျငံ ပှဲတှေ မတိုငျခငျ မှာ မနျစီးတီး တို့ ရှုံးပှဲ ကွုံတှေ့ သှားခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါဟာ လီဗာပူး နဲ့ ၈ မှတျ အထိ ပွတျသှား စခေဲ့ပွီး ဂှာဒီယိုလာ အတှကျတော့ လကျခံလို့ မရတဲ့ ကိစ်စ ဖွဈစေ ခဲ့ မှာပါ ။ ဒီပှဲ မှာ သူတို့ ပွနျပွီး ပေါကျကှဲ ပွပါလိမျ့မယျ ။ ပဲလစျေ့ မှာ က ဇာဟာ တဈယောကျ ပဲ ရှိပါတယျ ။ သူက မနျစီးတီး ခံစဈ ကို အနှောကျ အယှကျ ပေးနိုငျသညျ့တိုငျအောငျ စီးတီး တိုကျစဈ က သှငျးမယျ့ ဂိုးတှေ ကို ပွနျ ဖာထေးပေး နိုငျမှာ မဟုတျ ပါဘူး ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – ပဲလစျေ့ ၁ – ၅ မနျစီးတီး
၂ ။ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ – လီဗာပူး
ဒီပှဲ ဟာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ တို့ လကျရှိ အခွအေနေ တှကေို ပွောငျးလဲ ပဈမယျ့ အလှညျ့ အပွောငျး နရောလို့ ထငျမိ ပါတယျ ။ လီဗာပူး ကို ယူနိုကျတကျတို့ မယှဉျ နိုငျပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ ခံ ကစားနိုငျ ပါတယျ ။ အသငျးကွီး တှေ နဲ့ ဆုံတှမှေု့ မှာလညျး ယူနိုကျတကျ တို့ ရလဒျ ကောငျးနေ ဆဲပါ ။
လီဗာပူး အနနေဲ့ ဒီပှဲ ကို အနိုငျ မရလို့လညျး ဘာမှ ထူးထူး ခွားခွား ဖွဈသှားမှာ မဟုတျပါဘူး ။ ယူနိုကျတကျ ဘကျမှာတော့ ဒီပှဲ ကို ရှုံးခဲ့ မယျ ဆိုရငျ ကွီးမားတဲ့ အပွောငျး အလဲ တှေ ဖွဈလာနိုငျ ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ယူနိုကျတကျတို့ ဒီပှဲ ကို အသအေခြာ ပွငျဆငျ ပွီး ကစား သှားမှာပါ ။ တိုကျစဈမှာ ရကျဖိုဒျ့ ပဲ သုံးစရာ ရှိ ပါတယျ ။ ယူနိုကျတကျ ၁ ဂိုး ထကျ ပိုရမှာ မဟုတျတာ သခြော ပါတယျ ။ လီဗာပူး တိုကျစဈ ကို ခုခံနိုငျမယျ ဆိုရငျတော့ သရေ ဟာ အိမျရှငျ အတှကျ အကောငျးဆုံး အဖွဖွေဈလာ မှာပါ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ၁ – ၁ လီဗာပူး
၃ ။ ရှကျဖီး ယူနိုကျတကျ – အာဆငျနယျ
ရှကျဖီး ယူနိုကျတကျ အတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ စမျးသပျခကျြ တဈခု ဖွဈလာ မှာပါ ။ ရှကျဖီး ယူနိုကျတကျ ဟာ ခှနျအား အပွညျ့ နဲ့ ရှကေို့ တိုကျစဈ ဆငျကစား တတျ ပါတယျ ။ အာဆငျနယျ ရဲ့ ခံစဈ ကို သူတို့ ဒုက်ခ ပေးနိုငျ မှာပါ ။
ဒါပမေယျ့ အာဆငျနယျ ဘကျမှာလညျး အငျအား အပွညျ့ နဲ့ ရှကျဖီး ကို ထိုးနှကျ မှာ အသအေခြာ ပါပဲ ။ လာကာဇကျ လညျး အရနျစာရငျးမှာ ပွနျပါ လာလောကျ ပါတယျ ။ တိုငျယာနီ တို့လညျး အရနျ လူအဖွဈ နဲ့ မွငျတှေ့ ရနိုငျ ပါတယျ ။ ခံစဈ မှာ အားနညျးပမေယျ့ အာဆငျနယျ ရဲ့ တိုကျစဈကလညျး ပှဲတိုငျး ဂိုးသှငျးနတောပါ ။ အပွနျအလှနျသှငျးဂိုးတှေ နဲ့ ကွညျ့ကောငျးမယျ့ ပှဲ တဈပှဲ ပါပဲ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – ရှကျဖီး ယူနိုကျတကျ ၂ – ၃ အာဆငျနယျ
၄ ။ ခြဲလျဆီး – နယူးကာဆယျ
တနျးဆငျးဇုနျ နားမှာ ၀ဲ နတေဲ့ နယူးကာဆယျ ကို ခြဲလျဆီး တို့ လြော့မတှကျ သငျ့ ပါဘူး ။ သူတို့ ဒီရာသီ မှာ စပါး နဲ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ တို့ ကို အနိုငျ ကစားထားလို့ပါ ။ ဖရနျ့ လမျးပတျ ရဲ့ အသငျး ကတော့ လူငယျ တှေ နဲ့ ရဲရဲ ၀ံ့ဝံ့ ခြီတကျ နပေါတယျ ။ သူတို့ တှေ မှာ ယုံကွညျမှု အပွညျ့ ရှိနကွေတာ ကို တဈပှဲပွီး တဈပှဲ တှေ့ လာရ ပါပွီ ။
နယူးကာဆယျ ကတော့ စပါး နဲ့ တုနျးကလို ပဲ ကစားမှာပါ ။ ခြဲလျဆီး အတှကျတော့ နယူးကာဆယျ ခံစဈ ကို ခကျခကျ ခဲခဲ ထိုးဖောကျ ရပါလိမျ့မယျ ။ ဂိုး ဘယျ အခြိနျ မှာ စ ရမလဲ ဆိုတာ က ဒီပှဲ ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အခနျး ကဏ်ဍ ဖွဈမှာပါ ။ အနိုငျ ရလဒျ ကတော့ အိမျရှငျ အတှကျပဲ ဖွဈမှာပါ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – ခြဲလျဆီး ၂ – ၁ နယူး ကာဆယျ
၅ ။ တော့တငျဟမျ ဟော့စပါး – ၀ကျဖိုဒျ့
ဘယျလို ရလဒျ ထှကျပျေါ မလဲ ဆိုတာ ခနျ့မှနျး ရခကျ ပါတယျ ။ စပါး ဟာ မတညျငွိမျတဲ့ အသငျး တဈသငျး ဖွဈနေ ပွီး အနိုငျ ၊ သရေ ၊ အရှုံး ရလဒျ ၃ မြိုး စလုံးဟာ သူတို့ အပျေါ မှာ မူတညျ နပေါတယျ ။ ၀ကျဖိုဒျ့ ကလညျး ဒီရာသီ မှာ အခွအေနမေကောငျး သေးပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ လနျဒနျ ဒါဘီ ဖွဈတာ နဲ့ အညီ အကြိတျ အနယျတော့ ရှိကွ မှာပါ ။ စပါး ကလညျး မဟနျ ပါဘူး ။ အိမျရှငျ နိုငျဖို့ အလားအလာ ရှိပမေယျ့ သရေ ရလဒျ ကိုပဲ ရှေးခယျြ ခငျြ ပါတယျ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – စပါး ၁ – ၁ ၀ကျဖိုဒျ့
အခွား ပှဲစဉျ ခနျ့မှနျးခကျြမြား –
၆ ။ ဗီလာ ၃ – ၁ ဘရိုကျတနျ
၇ ။ ဘုနျးမောကျ ၄ – ၁ နောဝှဈချြ
၈ ။ လကျစတာ ၁ – ၁ ဘနျလေ
၉ ။ ၀ုဗျ ၃ – ၀ ဆောကျသမျတနျ
၁၀ ။ အဲဗာတနျ ၁ – ၂ ၀ကျဈဟမျး
ပရိသတျကွီးတို့ရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြ က ရော ဘာဖွဈမလဲဗြာ . . . . .
လီဗာပူး တို့ ကို ယူနိုက်တက် ရပ်တန့်နိုင် လိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ . . . ချာလီနီကိုလပ်စ် ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ( ၉ ) အတွက် ခန့်မှန်းသုံးသပ်ချက်များ
နိုင်ငံ တကာ ပွဲစဉ်တွေ အပြီး မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေး ပြိုင်ပွဲကြီး ပြန်လည် စတင် လာခဲ့ ပါပြီ ။ ယခု အပတ် မှာတော့ ပွဲစဉ် ၉ ကို ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွား ကြမှာ ဖြစ်ပြီး ပွဲကောင်း များစွာ ပါဝင် လို့ နေခဲ့ ပါတယ် ။ အိုးထရက်ဖိုဒ့် မှာ ကစားမယ့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ လီဗာပူး ၊ ပဲလေ့စ် နဲ့ မန်စီးတီး ၊ စပါး နဲ့ ၀က်ဖိုဒ့် တို့ရဲ့ လန်ဒန် ဒါဘီ အပါ အ၀င် အခြား သော ပွဲကြီး ပွဲကောင်းများစွာ ကို ကြည့်ရှု ခံစား ကြရဦး မှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ယခု အပတ် ယှဉ်ပြိုင် ကစား ကြမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ မှာ ဘယ်လို ရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ် နိုင်မလဲ ဆိုတာ ကို ချာလီ နီကိုလပ်စ် ( Sky Sport ) ရဲ့ ခန့်မှန်း သုံးသပ်မှုတွေ ကို လေ့လာကြည့်ကြရ အောင်ဗျာ . . .
၁ ။ ပဲလေ့စ် – မန်ချက်စတာ စီးတီး
နိုင်ငံ ပွဲတွေ မတိုင်ခင် မှာ မန်စီးတီး တို့ ရှုံးပွဲ ကြုံတွေ့ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ လီဗာပူး နဲ့ ၈ မှတ် အထိ ပြတ်သွား စေခဲ့ပြီး ဂွာဒီယိုလာ အတွက်တော့ လက်ခံလို့ မရတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်စေ ခဲ့ မှာပါ ။ ဒီပွဲ မှာ သူတို့ ပြန်ပြီး ပေါက်ကွဲ ပြပါလိမ့်မယ် ။ ပဲလေ့စ် မှာ က ဇာဟာ တစ်ယောက် ပဲ ရှိပါတယ် ။ သူက မန်စီးတီး ခံစစ် ကို အနှောက် အယှက် ပေးနိုင်သည့်တိုင်အောင် စီးတီး တိုက်စစ် က သွင်းမယ့် ဂိုးတွေ ကို ပြန် ဖာထေးပေး နိုင်မှာ မဟုတ် ပါဘူး ။
ခန့်မှန်းချက် – ပဲလေ့စ် ၁ – ၅ မန်စီးတီး
၂ ။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် – လီဗာပူး
ဒီပွဲ ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တို့ လက်ရှိ အခြေအနေ တွေကို ပြောင်းလဲ ပစ်မယ့် အလှည့် အပြောင်း နေရာလို့ ထင်မိ ပါတယ် ။ လီဗာပူး ကို ယူနိုက်တက်တို့ မယှဉ် နိုင်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ခံ ကစားနိုင် ပါတယ် ။ အသင်းကြီး တွေ နဲ့ ဆုံတွေ့မှု မှာလည်း ယူနိုက်တက် တို့ ရလဒ် ကောင်းနေ ဆဲပါ ။
လီဗာပူး အနေနဲ့ ဒီပွဲ ကို အနိုင် မရလို့လည်း ဘာမှ ထူးထူး ခြားခြား ဖြစ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ယူနိုက်တက် ဘက်မှာတော့ ဒီပွဲ ကို ရှုံးခဲ့ မယ် ဆိုရင် ကြီးမားတဲ့ အပြောင်း အလဲ တွေ ဖြစ်လာနိုင် ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ယူနိုက်တက်တို့ ဒီပွဲ ကို အသေအချာ ပြင်ဆင် ပြီး ကစား သွားမှာပါ ။ တိုက်စစ်မှာ ရက်ဖိုဒ့် ပဲ သုံးစရာ ရှိ ပါတယ် ။ ယူနိုက်တက် ၁ ဂိုး ထက် ပိုရမှာ မဟုတ်တာ သေချာ ပါတယ် ။ လီဗာပူး တိုက်စစ် ကို ခုခံနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ သရေ ဟာ အိမ်ရှင် အတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေဖြစ်လာ မှာပါ ။
ခန့်မှန်းချက် – မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ၁ – ၁ လီဗာပူး
၃ ။ ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက် – အာဆင်နယ်
ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက် အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ စမ်းသပ်ချက် တစ်ခု ဖြစ်လာ မှာပါ ။ ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက် ဟာ ခွန်အား အပြည့် နဲ့ ရှေ့ကို တိုက်စစ် ဆင်ကစား တတ် ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် ရဲ့ ခံစစ် ကို သူတို့ ဒုက္ခ ပေးနိုင် မှာပါ ။
ဒါပေမယ့် အာဆင်နယ် ဘက်မှာလည်း အင်အား အပြည့် နဲ့ ရှက်ဖီး ကို ထိုးနှက် မှာ အသေအချာ ပါပဲ ။ လာကာဇက် လည်း အရန်စာရင်းမှာ ပြန်ပါ လာလောက် ပါတယ် ။ တိုင်ယာနီ တို့လည်း အရန် လူအဖြစ် နဲ့ မြင်တွေ့ ရနိုင် ပါတယ် ။ ခံစစ် မှာ အားနည်းပေမယ့် အာဆင်နယ် ရဲ့ တိုက်စစ်ကလည်း ပွဲတိုင်း ဂိုးသွင်းနေတာပါ ။ အပြန်အလှန်သွင်းဂိုးတွေ နဲ့ ကြည့်ကောင်းမယ့် ပွဲ တစ်ပွဲ ပါပဲ ။
ခန့်မှန်းချက် – ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက် ၂ – ၃ အာဆင်နယ်
၄ ။ ချဲလ်ဆီး – နယူးကာဆယ်
တန်းဆင်းဇုန် နားမှာ ၀ဲ နေတဲ့ နယူးကာဆယ် ကို ချဲလ်ဆီး တို့ လျော့မတွက် သင့် ပါဘူး ။ သူတို့ ဒီရာသီ မှာ စပါး နဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တို့ ကို အနိုင် ကစားထားလို့ပါ ။ ဖရန့် လမ်းပတ် ရဲ့ အသင်း ကတော့ လူငယ် တွေ နဲ့ ရဲရဲ ၀ံ့ဝံ့ ချီတက် နေပါတယ် ။ သူတို့ တွေ မှာ ယုံကြည်မှု အပြည့် ရှိနေကြတာ ကို တစ်ပွဲပြီး တစ်ပွဲ တွေ့ လာရ ပါပြီ ။
နယူးကာဆယ် ကတော့ စပါး နဲ့ တုန်းကလို ပဲ ကစားမှာပါ ။ ချဲလ်ဆီး အတွက်တော့ နယူးကာဆယ် ခံစစ် ကို ခက်ခက် ခဲခဲ ထိုးဖောက် ရပါလိမ့်မယ် ။ ဂိုး ဘယ် အချိန် မှာ စ ရမလဲ ဆိုတာ က ဒီပွဲ ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အခန်း ကဏ္ဍ ဖြစ်မှာပါ ။ အနိုင် ရလဒ် ကတော့ အိမ်ရှင် အတွက်ပဲ ဖြစ်မှာပါ ။
ခန့်မှန်းချက် – ချဲလ်ဆီး ၂ – ၁ နယူး ကာဆယ်
၅ ။ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး – ၀က်ဖိုဒ့်
ဘယ်လို ရလဒ် ထွက်ပေါ် မလဲ ဆိုတာ ခန့်မှန်း ရခက် ပါတယ် ။ စပါး ဟာ မတည်ငြိမ်တဲ့ အသင်း တစ်သင်း ဖြစ်နေ ပြီး အနိုင် ၊ သရေ ၊ အရှုံး ရလဒ် ၃ မျိုး စလုံးဟာ သူတို့ အပေါ် မှာ မူတည် နေပါတယ် ။ ၀က်ဖိုဒ့် ကလည်း ဒီရာသီ မှာ အခြေအနေမကောင်း သေးပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် လန်ဒန် ဒါဘီ ဖြစ်တာ နဲ့ အညီ အကျိတ် အနယ်တော့ ရှိကြ မှာပါ ။ စပါး ကလည်း မဟန် ပါဘူး ။ အိမ်ရှင် နိုင်ဖို့ အလားအလာ ရှိပေမယ့် သရေ ရလဒ် ကိုပဲ ရွေးချယ် ချင် ပါတယ် ။
ခန့်မှန်းချက် – စပါး ၁ – ၁ ၀က်ဖိုဒ့်
အခြား ပွဲစဉ် ခန့်မှန်းချက်များ –
၆ ။ ဗီလာ ၃ – ၁ ဘရိုက်တန်
၇ ။ ဘုန်းမောက် ၄ – ၁ နောဝှစ်ခ်ျ
၈ ။ လက်စတာ ၁ – ၁ ဘန်လေ
၉ ။ ၀ုဗ် ၃ – ၀ ဆောက်သမ်တန်
၁၀ ။ အဲဗာတန် ၁ – ၂ ၀က်စ်ဟမ်း
ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် က ရော ဘာဖြစ်မလဲဗျာ . . . . .